Matory na Maty – Fizaràna faha-2: “Ny Palitao Mangan’i Aghyad” · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra سرمد الجيلاني Nandika (en) i Rami Alhames, Lara AlMalakeh, avylavitra
Voadika ny 12 Novambra 2016 2:02 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, русский, Español, Deutsch, عربي
SARY: Sehatra ho an'ny daholobe ao amin'ny Pixabay
Ity no fizarana voalohany amin'ny “Matory na maty”, andiany ahitàna fizaràna enina novokarin'i Sarmad Al Jilane, mpikatroka, mikasika ireo zavatra niainany tany anatin'ny fonja Siriana.. Vakio eto ny fizarana voalohany.
Tamin'izaho nivoaka, nahita fiara fitateram-bahoaka miloko fotsy, sary iray izay voarakitra ao amin'ny fahatsiarovanay nandritra ny volana vitsivitsy ireo fiaran'ny fitondram-panjakana miloko fotsy feno mpitandro filaminana. Niakatra tao anaty fiara aho, iray monja amin'ireo rehetra voafonja, miaraka amin'ny mpamily sy ny “namana”, araka ny fiantsoan'izy ireo, andiana mpitandro filaminana dimy mirongo fiadian'ny miaramila. Naharitra teo amin'ny manodidina ny daka 80, kapoka karavasy 100 – izay inoako fa kodiarana bisikileta – ary tsy fahatsiarovan-tena ora iray ny dia. Avy eo izahay tonga tany amin'ny nalehanay izahay.
Noraisin'izy ireo tamin'ny fombafomba mahazatra azy ao amin'ny sampana mpanadihadin'ny miaramila tao amin'ny Deir-ez Zour aho. Gadra am-polony eo an-tokotany. Nandeha tamin'ny làlana lava, lalantsara malalaka izahay, ary nanira-tena nizara tamin'ireo rindrina roa, voahodidina mpitandro filaminana manodidina ny 30. Nalain'ireo mpiambina notendrena hanaraka anay tao amin'ny trano kely eo amin'ny fidirana ny lalantsara izay zava-tsarobidy nanananay, toy ny vola.
“Esory ny akanjo”. Ny baiko dia avy amin'ny manamboninahitra ambony laharana iray. Nanomboka nanala ny akanjonay izahay. Ilay palitao manga – tsy maintsy notazoniko ilay izy niaraka tamin'ny fiainako. Tsy maintsy; an'i Aghyad rahalahiko izay naniry hanao azy tamin'io andro io, saingy tsy afaka nahita na ilay palitao na izaho. Toy ny sombi-mololo namikirako izay eritreritra izay: ny fanantenana fa ho tafavoaka aho ho an'ny rahalahiko sy ny palitaony. Tena mpino tokoa ny rahalahiko; mivavaka foana izy, matoky aho fa hamaly ny fivavahany Andriamanitra. Nanala ny atin'akanjonay izahay. “Ohatran'ny vao sambany mitsidika antsika ireto donendrina ireto. Esory ny atin'akanjonareo ary araho ny fepetra fiarovana roa; mitsambikìna ary miondreha haingana. Tsy manana ny tontolo andro ho anareo aho.”
Tsy niboridana aho, satria izay akanjo nesorina dia efa fakofakon'ny fiarahamonina. Nandritra ny 40 taona no efa nampitahotra ny raibenay sy ny rainay ity, ary ankehitriny mbola mampitahotra anay. Tsy nisy antony ho anao tokony hanagadrana anay, hanao anay izao fanalam-baraka lehibe izao. Karazana firenena inona ity – ilay iray izay ifampizaràntsika- izay manome fankasitrahana anay miaraka amin'ny olona toa anao? Karazana firenena inona no manolotra ny fikambananao ampinga volamena izay miaro anao tsy hiboridana tanteraka? Angamba mila averina faritana ny fotokevitra sasany.
Amin'ity indray mitoraka ity, tsy midika ho trano ny tanindrazana, fa kosa sombina tany izay nihaonan'ny olona ary nahavoatery azy ireo hiara-miaina. Noterena hiara- miaina isika, miaraka, isika sy izy ireo, na maty, samirery. An'ny olona izay manana ny fahefana amin'ity tany ity ny hery. An'ireo mandeha tsy manao kapa sy miboridana ny voninahitra, mitondra ny fireneny any am-pony. Efa mihoatra ny lohako ny horonam-peo mirakitra ny fanamelohana tsy tapaka ny herisetran'ny Amerikana any amin'ny fonjan'i Abo Graiba. Nanameloka ireo fihetsika ireo ny filohan'ny iray izay nivazavaza taminay. Tokony ho ratsy tarehy toa inona ianao mba ho afaka hanameloka an'i Abo Graiba, nefa tsy miezaka akory hihaino ny tabataba any ivelan'ny lapanao. Mety tsy fantany izany, nefa izy ilay iray izay naboridana, tsy izahay: tsya azo esorina ny fahamendrehan'ny olona afaka.
Ho fanoherana ny fiverimberenan'ny eso sy ompa, naverinay napetaka ny fitafianay, ary nanomboka nametraka anay tany anatin'ny efitry ny fonjanay izy ireo. “Sarmad any amin'ny fonjan'ny vondrona faharoa”. Niditra ny efitrano aho, nangina tao, ary nandinika ilay vao tonga ireo hafa efa tao anaty efitrano. Ilay palitao manga dia nahantoko tamin'ny fihantonan-damba vy teny an-joron-trano izay nametrahan'ireo hafa tao ny akanjony. Tsy dia zava-dehibe ny mahalala ny tsirairay, rehefa voaaro ilay palitao. Nipetraka teo akaikin'ny varavarana aho, izay toerana mahazatra fipetrahan'ny vao tonga. Malina ny tsirairay. “Mba mila rano aho”, hoy aho, tamin-tsento lalina. Tsy nisotro rano na nihanana na inona na inona aho nandritra ny andro sy ny alina. “Inty, ry rahalahy. Midira ry rahalahy, aza mijanona eny akaikin'ny varavarana.”. Feo iray reraka toy ny ahy no nankahery ny fanahiko mialohan'ny nankaherezan'ny rano ny vatako. Noho ny harerahana, natory an-toerana aho ary nony nifoha aho, efa alina sahady ny andro, na farafarahatsiny izay no fiheverako azy noho ny tsy fisian'ny tara-masoandro na tara-bolana handrefesana ny fotoana.
Irery teo an-joron-trano, na teo aza ny hamaroan'ny olona nameno ny efitrano. Firenena firy no afaka managadra ny vatanao? na miezaka misambotra olona faran'izay betsaka? Mitomany an-tongotra efatra toy ny zaza sarahina amin'ny reniny ianao, nefa ianao tsy rarahiany! Nokasihiko ny rindrina, notsapatsapaiko tamin'ny tanako ary noeritreretiko fa mety vita amin'ny tanimanga sy rà. Firenena firy no mandevina ity olona 18 taona ity? Nanàla ny loto teo an-dohany, nanafina azy ary lasa nandeha, toy ny hoe tsy nisy mihitsy aho.
Mety hoe tsy te-hanagadra anay izy ireo, fa miezaka hamorona firenana ho an'ny olona rehetra izay niantso fahalalahana. Mety nangonin'izy ireo ato izahay mba hizaràna anay ho firenena kely maromaro, amin'izay izahay mihodinkodina sady manondrika ny lohanay, ary mitantara amin'ny zanakay mikasika ny loha izay mijery sy mihitsoka amin'izany toetra izany.
Tapaka ny fahanginana nony nanomboka nanindry ny rindrina tamin'ny fela-tanany ny lehilahy iray 40 taona, fa tsy ny totohondriny, toy ny fanaonay rehefa hiresaka. Namaly ny fijeriko toa manontany ny lehilahy iray. “Manao tayammum izy satria tsy misy rano ato ankoatry ny ao an-trano fivoahana. Sotroinay izany ary ampiasainay hisasana matetika, fa aleon'i Dadatoa manao tayammum aloha isak'izay mivavaka izy”. Mitsangana eo an-joron'ny efitrano izy, miaraka amin'ny olona maro, mivavaka ary mitanisa Korany amin'ny feo iva. Niezaka hatrany aho tsy hanazava ny haben'ireny efitrano ireny. Kely tena kely izany ka tsy afaka faritana, nefa matetika, tena tsaroana ho lehibe noho ny maoske mifanila vodirindrina aminay izy ireo. “Amen”. Mampita hafatra ara-panahy izay nanorotoro ahy mihoatra noho ny nidirako voalohany tany am-piangonana ilay teny.
“Andriamanitra o! mivavaka foana ny rahalahiko Aghyad. Andriamanitra o! tsy mangataka ho ahy aho, fa ho an'ilay Palitaony Manga. Tsy tsara raha misy zavatra ratsy mahazo azy io, ka hiteraka fahadisoam-panantenana lehibe ho an'i Adhyad. Ahoana ny amin'ny raiko? Inona no nanjo azy? Im-betsakazy koa izy no mivavaka sy miantso an'Andriamanitra – kely ny vintana ny mbola tsy nanafahana azy!” Resaka tamin'ny tenako, taorian'izay natory aho.
Tamin'ny enina maraina tamin'izay, sady miditra ilay mpiambina no mihiaka. “Mitsangana daholo, ny tarehy mitodika any amin'ny rindrina.” Taorian'ny fiantsoana, nihiaka izy: “Abdul Rahman, Sarmad, Adnan ary Ahmed, mandrosoa aty’. Henoko taty aoriana kely fa tonga vao mangiran-dratsy ry zareo nandritra ny fotoana natoriako. Nandroso tao anatina efitrano kely tsy misy na inona na inona izahay. Latabatra iray sy seza iray teo akaikin'ny varavarana, rojo vy maromaro tao aoriana, miaraka amin'ny fantsona vy ho solon'ny fanantonana lay, izay ihantonan'ny rojo vy iray. Lietnà Voalohany iray mipetraka aorian'ilay latabatra, manao fanamiana manga, mitovy amin'ny an'ny Tafika an-dranomasina. Ny mpiambina dia Mohammed AlHalabi, izay no niantsoan'ilay Lietnà Voalohany azy. Naisoriny ny saron-tavanay, ary natombony tamin'i Adnan sy Ahmed. Izy roa ireo dia voasazy noho ny fihazàna taminà fitaovam-piadiana tsy nahazoana alalana: kapoka 20 ho an'ny tsirairay dia ampy nitsaràna azy ireo tao amin'ny efitrano fanadihadiana taorian'ny nanaronana ny lohany. Izaho sy Abdul Rahman no tavela.
“Tsy manam-pahavononana hanontany anareo roa ireo aho anio, na rahampitso koa aza. Homenay voninahitra ny vahininay mandritra ny telo andro, avy eo isika miresaka.” Niala ny efitrano izy. “Esory ny akanjo, tazony ihany ny atiny,” hoy Mohammed Ahalabi sady nanatona anay izy.
Noraisiny ny tananay ary nasiany rojovy, avy eo nafatony tamin'ilay rojo mihantona amin'ny fanantonana lay. Nosintoniny ny rojo mandra-pihantonay tamin'ny tananay, zara raha mikasika ny tany ny rantsan-tongotra. Mihevaheva eo anelanelan'ny tany sy ny lanitra ianareo, aseho toa sorona ho alatsa-drà. Nosaronany ny lohanay, ary renay ny gadon-tongony mamindra manalavitra.
Niala moramora izy ary nakatony ny varavarana. Nangina izahay natahotra izay ho fihetsiny. Tànana roa miakatra any amin'Andriamanitra, amin-kery. Nisy rà kely nivoaka teo amin'ilay kiaky ny rojo vy teo amin'ny tananay. Ny tongotra roa mihenjana, miezaka mikasika ny tany fa zara raha mahavita. Mitaraina tsy mijanona aho ary tsy haiko ny manajanona izany. Mitaraina koa i Abdul Rahman. Fampahafantarana anay voalohany io, mpanao ratsy roa teraka sy lehibe teto amin'ity tany ity. Mpanao ratsy roa izay tsy mahatanty mahita ny fireneny mihantona, toa azy ireo ankehitriny, izay nanana fahatoniana mahavariana, amina fotoana izay namafàna ny maha-olombelona tao amin'ny rakibolana ato anatin'ity tondra-drà ato anaty lakavy ity. Tsy misy mpanjakazaka haharitra mandrakizay. Tsy hanao anay an'izao izy ireo raha tsy natahotra. Ary ankehitriny, manantona fo roa mpandresy anivoan'ny faharesena izy ireo.
Mitombo tsikelikely ny fitarainana. “Andramo apetraka eo amin'ny tongotro ny anao, mba haka aina kely”, hoy Abdul Rahman, tamim-pahasarotana. Nitsangana teo ambony tongony aho. Tsy misy ahafahanay mandrefy hoe adin'ny firy izahay no teo, afaka fotsiny maminavina, ary tsy afaka ny hanao izany ela, noho ny tahotra hoe sao miditra tampoka ilay mpampijaly anay. Nifamadibadika toerana izahay, izany hoe izy indray no mitsangana eo ambony tongotro, nefa tsy tena manampy anay hampihena ny fanaintanana izany. ” io no antsoina hoe Shabeh [tenin-jatovo Siriana midika hoe mihantona amin'ny tànana na ny tongotra], araka izany rehefa afaka izahay, afaka miteny amin'ireo namanay fa lasa gadra politika ary niharan'ny Shabeh,” hoy Abdul Rahman, tsy afaka nanafina ny fanaintainany tamin'ny feony.
Nihomehezanay ny fanaintainanay. Zara raha tsaroanay roalahy ny fotoana mandalo eo anoloanay. Taitra tamin'ny feon'ny varavarana novohaina mafy izahay. Mohammed izay.
Nandika (en) i Rami Alhames